UMsunduzi uzinikele ukuthi kuthunywe wona – Msunduzi News
‘Ukhozi seluthe cababa,” lawa ngamazwi avame ukusetshenziswa ngabezokuphepha uma bebikezela ukuthi uMengameli noma imoto yakhe isithelekile. Kube njalo nasezinkundleni zokusubatha uMsunduzi Municilality Athletics Track zili-10 kuMasingana ngesikhathi isakhamuzi sokuqala kuleli uMengameli uCyril Matamela Ramaphosa etheleka ezovula le nkundla.
Ubengahambi yedwa uMengameli njengoba bekukhona phakathi kwabanye uNgqongqoshe Wezemidlalo uMhlonishwa uThokozile Xasa nesekela lakhe uMhlonishwa uGert Oosthuzen, uNgqongqoshe Wemfundo Ephakeme uMhlonihswa uNaledi Pandor, uNgqongqoshe Wezokuthutha uMhlonishwa uDkt uBlade Nzimande, ibamba likaNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uSihle Zikalala, uMphathiswa wezemidlalo esifundazweni iKwaZulu-Natal uMhlonishwa uBongi uMaSithole Moloi, iNkosi uPhathisizwe Chiliza onguSihlalo weNdlu YoBukhosi esifundazweni, kanye noMnu u-Alex Sikhosana we-Athletic South Africa (ASA). Bonke bamukelwe yiMeya uThemba Njilo ebihambisana noSomlomo namanye amakhansela.
Inkulumo ethi; ‘umfundisi ulindwa ngeculo’ iyiqiniso. Kube njalo nakuMengameli njengoba ngesikhathi esalindiwe kube nohambo lokuzivocavoca kulandelwa ikhwelo lakhe uMengameli lika ‘Thuma Mina.’ Kuthe uma kuphela uhambo wangena uMengameli kwachwaza inkundla.
Ephawula uMengameli utuse iqhaza loMsunduzi ekusingatheni imidlalo enhlobonhlobo esezingeni lomhlaba. “Leli dolobha seliphenduke ikhaya lokusingatha imidlalo, kuleli dolobha kusingathwa iComrades Marathon nengifi sa ukuba yingxenye yayo ngelinye ilanga, kube iMandela Day Marathon nengithembisa ukuthi ngizoba ingxenye yayo, kube iParacycling. Seniphinde nasingatha imicimbi yeDuzi Canoe Marathon esezingeni lomhlaba izikhathi ezingama-35. Ngijabula kakhulu ukubona abaningi boHlanga bebamba iqhaza kulo mdlalo, kanye neDuzi 2 Sani. Manje senibhansela phezu kwakho konke lokhu ngenkundla esezingeni lomhlaba i-Athletics Track,” kubeka uMengameli.
Khona lapho uMengameli uphinde wethulela uMasipala isigqoko kanye nesifundazwe sonkana ngokubambisana ekutheni babe nenhlokodolobha eqhakambisa ezemidlalo. “Siyathemba kuzosingathwa imidlalo eminingi kule nkundla. Siyathemba nokuthi nemihlangano eminingi izosingathelwa lapha ngoba sisebenzise imali eningi sakha le nkundla esezingeni lomhlaba. Isikole iMaritzburg College sesibekise ukusebenzisa le nkundla unyaka wonke ngenhloso yokuzilolonga. Ngiyajabula ukuthi uSkhosana we-Athletics South Africa ukhona ngoba yibona abazobe besingathela kule nkundla imidlalo enhlobonhlobo. Uma benza njalo ngicela bakhumbule ukuthi basuke bengamanxusa ezwe lethu,” kusho uMengameli.
IMeya ithi ngcingci kamdoli
ngokuvakashelwa nguMengameli wezwe. IMeya uNjilo uthe kuyamangaza ukuthi esikhathini esingangenyanga esedlule uMsunduzi ubuhanjelwe ngomasipala bonke abavela KwaZulu-Natal njengoba kulokhu sekufi ke uMengameli uqobo. “Sisuke singenzi ihaba uma sithi indawo yethu isiphenduke ikhaya elisemthethweni lezemidlalo. Lokhu sekufakazelwe nawukuthi uMengameli wezwe abone kufanele ukuthi kube nguye ovula ngokusemthethweni le nkundla”, kusho uNjilo ngokwesasa. Ngenyanga eyedlule le nkundla isingathe iSouth African Local Government Games, kanti phambi kwalokho wakuyimidlalo yokusubatha esezingeni lezwekazi i-Afrika.”
UNgqongqoshe Wezemidlalo uMhlonishwa uXasa utuse ukusukumela phezulu komphakathi waseMsunduzi uhlelo lokuzivocavoca nathe lunemiphumela emihle emqondweni nangokwempilo.
Odabeni oluthinta iMaritzburg College uthe lesi yisikole esiqhakambisa ezemidlalo, nesilekelela ezinye izikole ngezemidlalo, ngoba sinazo cishe zonke izinsiza ezimqoka kwezemidlalo. “ Ngokubambisana inhloso yethu ngukuvundulula amakhono, sikhulise ikhono lezingane zingavaleleleki ngokwamathuba. Ukuba nohlobo lwenkundla eseqophelweni eliphezulu kanje kuzolekelela ukuthi kungachithwa izimali kuyiswa abadlali abasebancane emazweni aphesheya ngenhloso yokuyothola ukuqeqeshwa, kodwa bazithole kuleli lizwe izinsiza.”
Esika elijikayo uMhlonishwa uZikalala ubonge uMengameli: “Kuyangijabulisa ukuthi le nkundla yakhelwe endaweni uMsunduzi ngoba uyinhlokodolobha yesifundazwe iKwaZulu- Natal. Leli yidolobha lezingqalabutho oBaba uMoses Mabhida, oHarry Gwala, oReggie Hadebe, oMnu u-Isaiah Ntshangase nabanye,” kubeka uKhuzeni.
USomlomo uNks uJabu Ngubo uthe, “Ngizizwa ngijabule ngohlelo lokuqala lokuqinisa umzimba ngokuhamba, ngoba luzokhumbuza izakhamuzi zaseMsunduzi ubumqoka bokuphila ngokuzinakekela.” Ilungu lomphakathi uNkk uZiwelile Chonco ukuvezile ukuthi ugqugquzeleke kakhulu ukuzwa ukuthi kunoMengameli, kanti futhi bahlezi befundiswa uma bevakashele emtholampilo ngokubaluleka kokuzivoca voca. UNkk uChonco uthe: “Ngijabule kakhulu ukuthi ngikwaze ukuqeda ibanga engilihambe ngezinyawo ebengingazitsheli ukuthi ngingakwazi ukulihamba, nesengisola ukuthi bengenziwa ubuvila. Namhlanje ngikhuthazekile futhi lokhu sekuzoba iyona ndlela yami yokuphila,” kuphetha uChonco.
Previous post: NoMsunduzi uyibambile ulwa ngculaza
Next post: IMeya ithi izingane zabafana azingashiywa ngemuva